Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo maanta kulan deg deg ah Kismaayo kula yeeshay Axmed Madoobe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo maanta kulan deg deg ah Kismaayo kula yeeshay Axmed Madoobe
Wafdi uu hogaaminayo ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayoe e xarunta gobolka J/hoose, halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo haatan ka mid ah xubnaha Aqalka Sare ee baarlamaanka cusub Soomaaliya ayaa xarunta madaxtooyadda magaalada Kismaayo kulan deg deg ah kula qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Labada dhinac ayaa sida la sheegay ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka, waxaana uu safarka ra;iisul wasaare Cumar C/rashiid ee magaalada Kismaayo kusoo beegmayaa xilli maalintii labaad ay magaaladaasi ka socdaan doorashada Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Saacadaha soo soco ayaa la filayaa in ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ay saxaafadda uga warbixiyaan waxyaabihii ay uga hadleen kulankaas.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa sidoo kale ka mid ah musharaxiinta haatan u tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo la filayo inay dhawaan dalka ka dhacdo.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa mudooyinkii ugu dambeysay socdaalo kala duwan ku maraayay qaar ka mid ah gobolada dalka, gaar ahaan deegaanada Puntland, halkaas oo uu ka doonayo in olololihiisa doorasho uu ka muujiyo deegaanada uu asal ahaan kasoo jeedo.